सर्वहारावादी कि विदेशवादी ?
बरिष्ठ अधिवक्ता शिव सिग्ेदल 0
जनताको लागि काम गर्छु भनेर कवोल गरेर चुनाव जितेपछि, सत्तामा पुगेपछि जनताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ । जनताले तिरको करको दुरुपयोग गर्न पाइन्न । नीतिगत अथवा अन्य तरिकाले समेत भ्रष्टाचार गर्नु राजनीतिक अपराध हो ।
राजनीतिमा अपराध गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । जनताप्रति जवाफदेहीता लिने नेताको चरित्रमा ह्रास आएको छ । चुनावका बेलामा जे जसरी राष्ट्रवादी नारा लगाउने गरिएको छ, चुनाव सकिएपछि बिर्सने बानी नेताहरुमा बढेको छ ।
चुनावमा आश्वासनका पुलिन्दा बनाएर घोषणापत्र जारी गर्छन् । हुने नहुने, सक्ने नसक्ने सबै प्रकारका कम गरिदिन्छु भनेर फूर्ति लगाउने चलन छ । चुनाव सकिएपछि घोषणापत्रमा के लेखेको छ भन्नेसम्म थाहा हुन्न नेताहरुलाई । यो स्थिति भनेको राजनीतिक बेइमानी हो । नेपालको राजनीतिमा इमान कम र बेइमानी ज्यादा छ । बेइमानीको फलिफाप छ ।
शासक र प्रशासकले अहिलेसम्म गरेको भनेको आफ्नो हित कसरी हुन्छ, कसरी बढी लाभ हुनसक्छ भन्ने नै हो । यहाँसम्म कि अवकाश भइसकेपछि विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत जो कसैले सम्पन्न जीवन बाँच्न सकिने आधारको हक कायम गराएका छन् । तिनलाई बिशिष्ट बनाउन जनताले जे जसरी पेट काटेर कर तिरेका थिए, ती जनताको हालत कस्तो छ ? तिनले बेवास्ता गर्ने गरेको छ । प्रत्येक नेपालीको थाप्लामा ३६ हजार ऋणको भार भइसक्यो, वर्तमान सांसद, सभासदले र पूर्वविशिष्टहरुले समेत व्यापक राज्यकोष दोहन गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा लोकप्रतिको यो ठूलो अपमान र शोषण हो । यस्तो अपराध गर्नुहुन्न भन्ने चेत छैन ।
आफ्ना परिवारजन बोकेर सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड दुवई हिडेका छन् । प्रधानमन्त्री सिंगापुर । सार्वजनिक भएको छ– प्रधानमन्त्रीलाई धपेडी भयो रे, प्रचण्ड पारिवारिक शान्तिका लागि दुवई गएका हुन् रे । देशका जिम्मेवार नेताहरु यसरी आराम फर्माउन विदेश जानु हुन्छ कि हुन्न ? यसरी जाँदा देशका लागि के कति लाभ हुन्छ ? यसबारेमा स्पष्ट हुन जरुरी थियो । जनताले तिरेको पैसाको दुरुपयोग गरेर अथवा कमाएको भए के कसरी कमाएको स्रोत खुलाएर खर्च गर्नुपर्छ र जनताले सबैकुरा पारदर्शी रुपमा थाहा पाउनुपर्छ ।
प्रचण्ड र ओलीको स्वास्थ्य, उनीहरुले देश र जनतालाई दिन खोजेको के हो ? जनताले थाहा पाउनुपर्छ । लोकतन्त्र भन्ने, नेतातन्त्र, भाट र भजनतन्त्र चलाउने हो भने यस्तो तन्त्र लामो समजय चल्न सक्दैन । निरंकूशताविरुद्ध जनताले गरेको आन्दोलनको प्रतिफल हो यो परिवर्तन, जनता आक्रोसित भए भने त्यस्तो आन्दोलन फेरि पनि हुनसक्छ, नेता जो कसैलाई ज्ञात हुनुपर्छ ।
देशमा भूकम्पपछि बाढी पहिरोको पीडा छ । ती पीडित जनताको पक्षमा राज्यले के गरिरहेको छ, नागरिक समाज के कसरी परिचालित छ, त्यतातिर ध्यान दिन छाडेर परिवार र आराम फर्माउने कलाको प्रदर्शन गर्ने हो भने लोकतन्त्रको भविष्यसँग यस्तो अराजकनीतिक क्रियाकलाप जोडिएर बसिरहन सक्दैन, ज्ञात रहोस् ।